MAGL inhibitor နှင့် FAAH တား: JW-642 & ol-135 & PF-750 丨 AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/MAGL inhibitor နှင့် FAAH တား: JW-642 & ol-135 & PF-750
အပေါ် Posted 08 / 15 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
2.Biological လုပ်ဆောင်ချက်-CAS: 1416133-89-5
4.Biological လုပ်ဆောင်ချက်-CAS: 681135-77-3
5 ။ PF-750 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
6.Biological လုပ်ဆောင်ချက်-CAS: 959151-50-9
7 ။ JZL-184 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
8.Biological လုပ်ဆောင်ချက်-CAS: 1101854-58-3
တစ်ဓာတ်ပြုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဆောင်သော monoacylglycerol lipase ၏ 9.Highly ရွေးချယ် inhibitors
ခြေလှမ်းတို့က JW-10 MAGL inhibitor ခြေလှမ်းကိုဝယ်အပေါ် 642.Guide
JW 642 ကဗီဒီယို
I.JW 642 အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: JW 642
သိုလှောင်မှုကို Temp: -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်3နှစ်ပေါင်း Powder မှာ
1 ။ JW-642 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
JW-642 (1416133-89-5) အသီးသီး mouse ကို, ကြွက်နှင့်လူ့ MAGL များအတွက် 50 ၏ IC7.6, 14 နှင့် 3.7 nm နှင့်အတူ inhibitor တစ်အစွမ်းထက်, ရွေးချယ် monoacylglycerol lipase (MAGL) ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော 2-arachidonoyl က glycerol (2-AG က) အဖြစ် Endocannabinoids နှင့် arachidonoyl ethanolamide ဇီဝ cannabinoid receptors ၏ activation အပါအဝင် Synaptic ဖြစ်စဉ်များ၏နံပါတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုတက်ကြွ lipids ဖြစ်ကြသည်။ Monoacylglycerol lipase (MAGL), အရှင်က၎င်း၏ဇီဝ function ကိုရပ်စဲ, arachidonic အက်ဆစ်နှင့်က glycerol မှ 2-AG က၏ Hydrolysis များအတွက်တာဝန်ရှိတစ်ဦး serine hydrolase ဖြစ်ပါတယ်။ JW-642 IC50 mouse ကိုအတွက် MAGL ၏တားစီးဘို့ 7.6, 14 နှင့် 3.7 nm ၏တန်ဖိုးများကို, ကြွက်, လူ့ဦးနှောက်အမြှေးပါးဖော်ပြပေးသော monoacylglycerol lipase (MAGL) ၏ inhibitor တစ်အစွမ်းထက်သည်, respectively.1 JW-642, MAGL များအတွက်ရွေးချယ်ဖြစ်ပါသည် ထိထိရောက်ရောက်ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase လှုပ်ရှားမှု (အသီးသီး mouse ကို, ကြွက်, လူ့ဦးနှောက်အမြှေးပါးအဘို့အ IC50s = 31, 14 နှင့် 20.6 μM) တားစီးဖို့အများကြီးပိုမိုမြင့်မားပြင်းအားလိုအပ်။
CAS number ကို 1416133-89-5
ပျော်ဝင် -10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ DMSO> 20 MM သိုလှောင် Store မှာပျော်ဝင်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင် methyl acetate အတွက်ဖြေရှင်းချက်
shipping အခြေအနေ အကဲဖြတ်နမူနာဖြေရှင်းချက်: အပြာ ice.All အခြားရရှိနိုင်အရွယ်အစားနှင့်အတူသင်္ဘော: တောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်သို့ RT ကိုနှင့်အတူသင်္ဘော, ဒါမှမဟုတ်အပြာရေခဲ
အထွေထွေအကြံပေးချက်များ မြင့်မားနိုင်မှုရယူဘို့, 37 ℃မှာပြွန်နွေးကျေးဇူးပြုပြီးနှင့် while.Stock ဖြေရှင်းချက်များအတွက် ultrasonic ရေချိုးထဲမှာလှုပ်လပေါင်းများစွာ -20 ℃အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
2 ။ ဇီဝလှုပ်ရှားမှု-CAS: 1416133-89-5
JW-642 အသီးသီး IC50 mouse ကိုအတွက် MAGL ၏တားစီးဘို့ 7.6, 14 နှင့် 3.7 nm ၏တန်ဖိုးများကို, ကြွက်, လူ့ဦးနှောက်အမြှေးပါးဖော်ပြပေးသော monoacylglycerol lipase (MAGL) ၏ inhibitor တစ်အစွမ်းထက်သည်။ IC50: 7.6 / 14 / 3.7 nm (mouse ကို / ကြွက် / လူ့ MAGL)
ပစ်မှတ်: MAGL inhibitor JW-642 (အသီးသီး mouse ကို, ကြွက်, လူ့ဦးနှောက်အမြှေးပါးအဘို့အ IC50s = 31, 14 နှင့် 20.6 M က,) ထိရောက်စွာဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase လှုပ်ရှားမှုတားစီးဖို့အများကြီးပိုမိုမြင့်မားပြင်းအားလိုအပ်, MAGL များအတွက်ရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ ol-135 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ol-135 တစ် CNS ထိုးဖောက်မှု, FAAH ၏အလွန်အမင်းအစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် Reversible လုပ် inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ ol-135 ဤတိုက်ရိုက် CB1 agonism.FAAH တား ol-135 ဝယ်ယူ disrupts, ဒါပေမယ့်မဆက်စပ်ကြောက်စိတ်စုစည်းပြီး, အေးစက်နှင့်ထိတ်လန့် reactivity ကိုကွောကျရှံ့ conditioning.Auditory ဆက်စပ်မော်တာချွတ်ယွင်းခြင်းမရှိဘဲအမျိုးမျိုးသောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် analgesic ဆေးဝါးဗေဒ unaffected.Together အဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းထားပါတယ် ဒေတာကိုကွောကျရှံ့အေးစက် Paradigm ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်အတွက် endocannabinoids များအတွက်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။
CAS number ကို 681135-77-3
သန့်ရှင်းစင်ကြယ် > 98% (သို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏လက်မှတ်ကိုကြည့်ပါ)
shipping အခြေအနေ Non-အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုအဖြစ်အပူချိန်အောက်မှာတင်ပို့။ ဒီထုတ်ကုန်အကောက်ခွန်အတွက်သုံးစွဲသာမန်သင်္ဘောနှင့်အချိန်ကာလအတွင်းရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အလုံလောက်အောင်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
သိုလှောင်ခြင်းအခြေအနေ0ကို C တိုတောင်းသောသက်တမ်း (ရက်ရက်သတ္တပတ်မှ) သို့မဟုတ် -4 ကို C ရေရှည်များအတွက် (နှစ်လခန့်) - ခြောက်သွေ့မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့် 20 မှာ။
ပျော်ဝင် DMSO အတွက်မဟုတ်ဘဲရေထဲမှာပျော်ဝင်
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားလျှင်>2နှစ်ပေါင်း
မူးယစ်ဆေးရေးဆွဲ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး DMSO အတွက်ဖော်စပ်စေခြင်းငှါ
စတော့အိတ်ဖြေရှင်းချက်သိုလှောင် ရေရှည်အဘို့ (ရက်သတ္တပတ်မှရက်ပေါင်း) တိုတောင်းသောသက်တမ်း0ကို C, ဒါမှမဟုတ် -4 ကို C (လအတွင်း) - 20
4 ။ ဇီဝလှုပ်ရှားမှု-CAS: 681135-77-3
ol-135 တစ် CNS ထိုးဖောက်မှု, CB1, CB2 နှင့် anandamide ၏ analgesic နှင့် hypothermic လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးကြောင်းμနှင့်δ opioid receptors လှုပ်ရှားမှုများကငျးမဲ့ FAAH ၏အလွန်အမင်းအစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် Reversible လုပ် inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH) anandamide နှင့် oleamide အပါအဝင်ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင်၏ Hydrolysis နှင့် inactivation များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ PF-750 ထင်ရှားအမျိုးမျိုးသောလူ့ခြင်းနှင့် murine တစ်ရှူး proteome နမူနာ 50 နှင့် 0.6 မိနစ် recombinant လူ့ FAAH နှင့်အတူ preincubated သည့်အခါ 0.016 နှင့်5μM၏ IC60 တန်ဖိုးများနှင့်အတူအစွမ်းထက်, အချိန်-မှီခို, နောက်ကြောင်းပြန်မလှည် FAAH inhibitor ဖြစ်ပါသည်, respectively.1 လုပ်ဆောင်ချက်-based ကို PF-750 500 μMအထိမျှသဘော off-site လှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်းအခြား serine hydrolases မှ FAAH ဆွေမျိုးများအတွက်အလွန်အမင်းရွေးချယ်ကြောင်း။
CAS number ကို 959151-50-9
ပျော်ဝင် DMSO အတွက်ပျော်ဝင်
6 ။ ဇီဝလှုပ်ရှားမှု-CAS: 959151-50-9
အသီးသီး 750 နှင့် 50 မိနစ် recombinant လူ့ FAAH နှင့်အတူ preincubated သည့်အခါ PF-0.6 IC0.016 အတူအစွမ်းထက်, အချိန်-မှီခို, နောက်ကြောင်းပြန်မလှည် FAAH inhibitor5နှင့် 60 μMတန်ဖိုးထားသည်။ ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH) anandamide နှင့် oleamide အပါအဝင်ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင်၏ Hydrolysis နှင့် inactivation များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောလူ့ခြင်းနှင့် murine တစ်ရှူး proteome နမူနာ၏လုပ်ဆောင်ချက်-based ကို PF-750 500 μMအထိမျှသဘော off-site လှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်းအခြား serine hydrolases မှ FAAH ဆွေမျိုးများအတွက်အလွန်အမင်းရွေးချယ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ PF-750 10 မိ preincubation ပြီးနောက် URB597 (Sigma # U4133) ထက် 30-ခေါက်ပိုကောင်းအာနိသင်ပြသထားတယ်။ PF-750 FAAH အပေါ်အလွန်အမင်းရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှ 500 μMသကဲ့သို့မြင့်မားသောအချိန်, ကအများအပြားစမ်းသပ်ပြီးအင်ဇိုင်းတွေနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ interaction ကရှိခဲ့ပေမယ့် URB597 နှင့်အခြားထင်ရှား FAAH inhibitors အနိမ့် concentraction (100 μM) မှာကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။
JZL-184 (1101854-58-3) အသီးသီး mouse ကိုဦးနှောက်အမြှေးပါးအတွင်း MAGL နှင့် FAAH ၏တားစီးဘို့ 50 nm နှင့် 8 μM၏ IC4 နှင့်အတူ MAGL ၏ inhibitor တစ်အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ်သည်။ IC50 တန်ဖိုးကို: 8 nm ပစ်မှတ်: စသည်တို့အတွက် MAGL inhibitor: JZL-184 hippocampal ချပ်ထဲမှာ CA1 ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက် cerebellar ချပ်နှင့် DSI အတွက် Purkinje အာရုံခံအတွက် DSE ရှည်။ JZL-184 ကြွက် MAGL ထက် mouse ကို MAGL ဟန့်တားမှာပိုအစွမ်းထက်ပါတယ်။ Vivo အတွက်: 16 မှာကြွက်မှအုပ်ချုပ်ခွင့် intraperitoneally, JZL-184, 85% အားဖြင့် MAGL လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေခြင်းဖြင့် 2-ခွံဦးနှောက် 8-AG ကအဆင့်ဆင့် elevates နှင့်သှေးတူတဲ့ညွှန်ကြားကြောင်းနာကျင်မှု assay အမျိုးမျိုးအတွက် analgesic လှုပ်ရှားမှု elicits / ကီလိုဂရမ် MG လိုက်တဲ့အခါ အလယ်ပိုင်း cannabinoid (CB1) agonists ။ FAAH မှ JZL-184 ၏ acute အုပ်ချုပ်ရေး (- / -) ကြွက် cannabimimetic တုံ့ပြန်မှု၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်၏ပြင်းအားမြှင့်တင်ရန်, JZL-184 ကုသမှု၎င်း၏ antinociceptive သက်ရောက်မှုမှသည်းခံစိတ်မှΔ-tetrahydrocannabinol ၏ pharmacological သက်ရောက်မှုမှ Cross-သည်းခံစိတ်ဦးဆောင်ထပ်ခါတလဲလဲ, လျော့နည်းစေ CB1 အတွက်အဲဒီ receptor agonist-stimulation guanosine 5'-O- (3 - [(35) S က] thio) မသက်ဆိုင် genotype ၏ binding triphosphate နှင့် rimonabant-precipitated ဆုတ်ခွာအပြုအမူတွေအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်မှီခို။
JZL -184 နညျးပညာ
သန့်ရှင်းစင်ကြယ် ≥98% (TLC)
ပျော်ဝင် DMSO အတွက်အဲဒီပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ (10mg / ml)
8 ။ ဇီဝလှုပ်ရှားမှု-CAS: 1101854-58-3
JZL-184 ရွေးချယ် MAGL, အ endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG က) ၏ပျက်စီးခြင်းအဘို့အများစုတာဝန်ရှိအင်ဇိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Anandamide နှင့် 2-AG ကယင်း cannabinoid receptors CB1 နှင့် CB2 ကိုသက်ဝင်သောနှစ်ခု endogenous endocannabinoids ဖြစ်ကြသည်။ monoacylglycerol lipase (MAGL) 2-AG က၏ပျက်စီးခြင်းအဘို့အဓိကတာဝနျရှိအင်ဇိုင်းဖြစ်ထင်နေသည်သော်လည်း Anandamide အများစု, ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH) က metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်။ MAGL အများစုတွင်လက်ရှိရရှိနိုင် inhibitors ရွေးချယ်မဟုတ်လည်း FAAH သို့မဟုတ်အခြားအင်ဇိုင်းတွေတားစီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာနှစ်ခု၏လှုပ်ရှားမှုများခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်။ JZL-184 nanomolar portency နှင့် FAAH vs MAGL များအတွက် 200-ခွံကို select ကျော် MAGL ၏ inhibitor ကိုပထမဦးဆုံးရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်မှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့အခါ, JZL-184 anandamide ၏အဆင့်ဆင့်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်အတူအကြောင်းကို 2-ခွံအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ 8-arachidonoylglycerol ၏အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
9 ။ တစ်ဓာတ်ပြုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဆောင်သော monoacylglycerol lipase ၏မြင့်မားရွေးချယ် inhibitors
အဆိုပါ endocannabinoids 2-arachidonoyl က glycerol (2-AG က) နှင့် N-arachidonoyl ethanolamine (anandamide) အဓိကအားအသီးသီး monoacylglycerol lipase (MAGL) နှင့်ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH) ကပျက်ဆီးဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည်။ ရွေးချယ် MAGL inhibitors ကဲ့သို့သော JZL-184 အဖြစ်အို-aryl carbamates ၏မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိ Vivo အတွက် 2-AG ကအချက်ပြလမ်းကြောင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေး enabled သိရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, JZL-184 နှင့်အခြား MAGL inhibitors နေဆဲအချို့ဇီဝလေ့လာမှုများအတွက်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုရှုပ်ထွေးနိုင်သည့်, FAAH နှင့်အရံ carboxylesterases နှင့်အတူ low-level Cross-reactivity ကိုဖော်ပြရန်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့စသည်တို့နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အာနိသင်နှင့် FAAH နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. Cross-reactivity ကိုဖေါ်ပြခြင်းအပါအဝင်ကိုအလွန်တိုးတက်လာသော selection အတူ Vivo အတွက် MAGL ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင့်အို-hexafluoroisopropyl တစ်ဦးကွဲပြားလူတန်းစား (HFIP) carbamates သတင်းပို့ပါ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် MAGL ဟန့်တားတစ်ခုစွယ်စုံ chemotype အဖြစ် HFIP carbamates သတ်မှတ်နှင့်သဘာအလွှာ၏အဆောက်အဦပုံနဲ့တူတဲ့ဓာတ်ပြုအဖွဲ့များကိုထမ်းသောအခြားအ serine hydrolase inhibitors ၏လိုက်စားအားပေးသင့်ပါတယ်။
10 ။ ဝယ် JW-642 MAGL inhibitor အပေါ်ကိုလမ်းညွှန် ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်း
AASraw အပေါ်♦ရှာရန် JW-642 Powder (1416133-89-5)
♦အထဲက Find JW-642 Powder ပြတင်းပေါက် XP ကို, သင်၏ requirmnets ချရေးပါ။
3228 Views စာ
Stenbolone မှုန့် 8 အရေးကြီးအရာ	ကမ်ဘာပျေါတှငျ 8 သြဇာအရှိဆုံးလိင်မူးယစ်ဆေး Powder